ဆုမြတ်နိုးဦးကတော့ မောင် လေးတွေကို ဈေးဗန်းခင်းပြီး ဆော့ထားတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေး…. – Cele Snap
ဆုမြတ်နိုးဦးကတော့ မောင် လေးတွေကို ဈေးဗန်းခင်းပြီး ဆော့ထားတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေး….
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီဗီဒီယို လေးထဲမှာ တော့ ဆုမြတ်နိုးဦး က မောင်လေးတွေ အသည်းကြွေ လောက်တဲ့ စကားလုံးလှလှလေး တွေနဲ့ ခြွေထားတဲ့ tik tok လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဖက်ရှင်ကျကျ လေးဝတ်ဆင်ထား တာကလည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတရား တွေ ပိုမိုပေါ်လွင် စေခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီး လည်း ဆုမြတ်နိုးဦး ရဲ့ အသည်း ယားစရာ tik tok လေးကို သဘောကျ မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။မင်းသမီး ချောလေး ဆုမြတ်နိုးဦး ကတော့ အောင်မြင် နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် တွေထဲမှာ တစ်ယောက် အပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ဘယ်လိုဇာတ်ရုပ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်ထားနိုင်သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ တော့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ ကြော်ငြာ တွေအပြင် တန်ဖိုးကြီး လက်ဝတ်ရ တနာတွေကို Online ကနေရောင်း ပေးနေတာ တွေ့ရပါ တယ်။
ဆုမြတ်နိုးဦး က သွယ်လျ ကျစ်လျစ် ကိုယ်လုံး လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဆွဲဆောင် မှုရှိတဲ့ အပြုံးလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေက လည်း ချစ်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလော မှာလည်း ပရိသတ် တွေချစ်အားပိုမယ့် tik tok လေးတွေဆော့ ကစားတာ တွေ့ရပါတယ်။
Credit & Source – Hsu Myat Noe Oo Tik Tok Acc
ခဈြပရိသတျကွီးရေ ဒီဗီဒီယို လေးထဲမှာ တော့ ဆုမွတျနိုးဦး က မောငျလေးတှေ အသညျးကွှေ လောကျတဲ့ စကားလုံးလှလှလေး တှနေဲ့ ခွှထေားတဲ့ tik tok လေးပဲဖွဈပါတယျ။ဒါ့အပွငျ ဖကျရှငျကကြ လေးဝတျဆငျထား တာကလညျး ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ ပငျကိုယျ အလှတရား တှေ ပိုမိုပျေါလှငျ စခေဲ့ပါတယျ။
ပရိသတျကွီး လညျး ဆုမွတျနိုးဦး ရဲ့ အသညျး ယားစရာ tik tok လေးကို သဘောကြ မယျလို့မြှျောလငျ့မိပါတယျ။မငျးသမီး ခြောလေး ဆုမွတျနိုးဦး ကတော့ အောငျမွငျ နတေဲ့ သရုပျဆောငျ တှထေဲမှာ တဈယောကျ အပါအဝငျပဲ ဖွဈပါတယျ။သူမဟာ ဗီဒီယိုဇာတျကားတှထေဲမှာ ဘယျလိုဇာတျရုပျတှပေဲဖွဈဖွဈ ပီပွငျအောငျသရုပျဆောငျထားနိုငျသူပဲ ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာ တော့ အနုပညာ လှုပျရှားမှုအနနေဲ့ ကွျောငွာ တှအေပွငျ တနျဖိုးကွီး လကျဝတျရ တနာတှကေို Online ကနရေောငျး ပေးနတော တှရေ့ပါ တယျ။
ဆုမွတျနိုးဦး က သှယျလြ ကဈြလဈြ ကိုယျလုံး လေးကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး ဆှဲဆောငျ မှုရှိတဲ့ အပွုံးလေးတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှကေ လညျး ခဈြနရေတာ ဖွဈပါတယျ။ လတျတလော မှာလညျး ပရိသတျ တှခေဈြအားပိုမယျ့ tik tok လေးတှဆေော့ ကစားတာ တှရေ့ပါတယျ။
လေဖြတ်ပြီး မှတ်ဉာဏ်ချို့ရွင်းသွားတဲ့ ဖခင်ကြီး ကိုမင်းလှိုင်(မွန်ကြီး) ကိုစောင့်ရှောက်ရင်း အနုပညာအလုပ်တွေစတင်လုပ်ကိုင်တော့မယ့် သျှင်မင်းသူ
သူမရဲ့ လှပလွန်းတဲ့ပုံရိပ်တစ်ချိူ့ကို အမြဲရိုက်ကူးပေးနေတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာလေးကို ဆေးထိုးကျီဆယ်လိုက်တဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ဗီဒီယိုလေး